Ixesha leXesha loXolo- Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Ngaba “ixesha loxolo” lalisele likho?
Oko kuthethwa yiMagisterium.
Lilani nina bantwana babantu!
Sililele konke okulungileyo, kwaye kuyinyani, kwaye kuhle.
Luisa-Imisebenzi yoMoya wangaphakathi
Ngaphandle kokunyaniseka, imisebenzi yethu ifile.
… Uyakufumana olona lonwabo lukhulu.